चितवन ३ः प्रचण्ड नै धरापमा
HOME » चितवन ३ः प्रचण्ड नै धरापमा
काठमाडौं। स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा थयो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका । यहाँको मेयर पदकी प्रतिस्पर्धी रेणु दाहाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी हुनु र उनले हार्न लागेपछि मतपत्र च्यातिनुले गर्दा चितवन निकै चर्चामा रह्यो । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आइसक्यो र रेणुले चुनाव जितेर मेयर पद सम्हालिरहेकी छिन् । तर, भरतपुरको चर्चा सेलाउनुको सट्टा झनै तातेको छ । कारण, यहाँ अब हुन लागेको प्रतिनिधिसभामा उनै प्रचण्ड उम्मेदवार छन् ।
उतिबेला प्रचण्डलाई दूधले नुहाएजस्तै पवित्र देख्ने कांग्रेस अहिले उनै प्रचण्डको खेदो खनिरहेको छ – उही ठाउँ भरतपुरमा ।
यहाँको सबैभन्दा रोचक पक्ष त के भने ६ महिनाअघि यहाँ प्रचण्डको दल माओवादीलाई समर्थन गर्ने दल कांग्रेस उनको विपक्षमा छ र उतिबेला उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दल एमाले उनकै सहयात्री बनेको छ । प्रचण्डले आफूलाई हराउन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउने मेयर पदका पराजित उम्मेदवार देवी ज्ञवाली प्रचण्डको चुनावी अभियानका सारथी बनेका छन् । र, उतिबेला प्रचण्डलाई दूधले नुहाएजस्तै पवित्र देख्ने कांग्रेस अहिले उनै प्रचण्डको खेदो खनिरहेको छ – उही ठाउँ भरतपुरमा ।
चितवनकै भएर पनि अहिलेसम्म आफ्नो जिल्लाबाट चुनाव नलडेका प्रचण्डलाई यहाँबाट चुनाव जित्नु त्यति सहज छैन ।
नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रचण्ड अहिले चितवन ३ बाट मात्रै उम्मेदवार छन् । यसअघि २ ठाउँबाट चुनाव लड्ने गरेका प्रचण्ड पछिल्ले कानुनी व्यवस्थाअनुसार २ ठाउँबाट लड्न नपाइने भएपछि यही एउटा मात्र ठाउँमा उठेका छन् । नेपाली राजनीतिका पहुँचवाला बनिराख्न उनलाई कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्नुपर्ने दवाव छ । तर, चितवनकै भएर पनि अहिलेसम्म आफ्नो जिल्लाबाट चुनाव नलडेका प्रचण्डलाई यहाँबाट चुनाव जित्नु त्यति सहज छैन ।
यहाँ प्रचण्डसँग वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री विक्रम पाण्डे चुनावी मैदानमा छन्। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन छ भने प्रचण्डलाई एमालेको समर्थन छ। दुवै उम्मेद्वारले अर्को बलियो दलको समर्थन पाएकाले यस पटकको निर्वाचन निकै रोचक बन्ने देखिन्छ। राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डको ‘हाइट’ले चुनाव जिताउन सहज हुने अनुमान गरिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । चुनाव जित्नको लागि दल ठूलो हुनु भन्दा व्यक्तिको प्रभाव गहिरो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बिक्रम पाण्डेको करिअरले पुष्टि गर्छ । पाण्डे अघिल्लो संविधानसभामा चितवनबाटै निर्वाचित सांसद हुन्, त्यो पनि कुनै ठूलो दलबाट होइन ‘सानो’ भनिएको दल राप्रपाबाट । राप्रपाले पूरै देशबाट मात्रै ३ स्थानमा जित्दा पाण्डेले चितवनमा हलो चुनाव चिन्हबाटै जितेका हुन् । सानो दलबाट पनि आफ्नो व्यक्तिगत ‘दम’मा चुनाव जित्ने क्षमता राख्ने पाण्डेलाई अहिले ठूलो दल कांग्रेसले समर्थन गर्दा उनी कतिसम्म शक्तिशाली बन्न सक्छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पाण्डेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा नेकपा एमालेका नेता दानबहादुर तामाङलाई फराकिलो मतले पराजित गर्दै विजयी भएका थिए। हलो चुनाव चुन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका पाण्डेले एमाले नेता तामाङ र माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई हराएका थिए। पाण्डे मतदातासँग राम्रोसँग भिजेका छन्। तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिराहाबाट चुनाव जितेका प्रचण्ड चितवनका स्थानीय भएपनि त्यहाँका मतदातासँग त्यति नजिक छैनन्। आफ्नो जिल्ला छोडेर चुनाव लड्ने प्रचण्डलाई यही कारण पाण्डेले एक अन्तरवार्तामा ‘टुरिस्ट नेता’ समेत भनेका थिए । आफ्नै जिल्लामा राम्रोसँग नभिजेका प्रचण्डलाई चुनाव जित्न त्यति सहज छैन भन्ने यसअघिको मतको विश्लेषण गर्दा प्रस्टै बुझिन्छ ।
चुनाव प्रचारका क्रममा प्रचण्डले आफूले प्रतिस्पर्धी नै नदेखेको टिप्पणी गरेका थिए । चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारले सामान्यतया हार्छु भन्दैनन् । उनीहरुले मतदातालाई आकर्षण गर्नकै लागि पनि चुनाव आफैंले जित्ने दावी गर्छन् । प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति पनि प्रचण्डको त्यही चुनावी रणनीति हुनुपर्छ । किनकि, पाण्डे त्यति कमजोर उम्मेदवार होइनन् । र, राजनीतिका अनुभवी खेलाडी प्रचण्डले यो पक्कै बुझेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिको ‘हाइट’को दम्भमा यो अभिव्यक्ति पक्कै दिएका होइनन् । किनकि २०६४ मा जितेको दम्भ पाल्दा २०७० को अर्को चुनावमा भोगेको नियति प्रचण्डलाई राम्रैसँग याद हुनुपर्छ । तसर्थ उनले पक्कै पनि दम्भका आधारमा अभिव्यक्ति दिने छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पाण्डे त्यति कमजोर उम्मेदवार होइनन् । र, राजनीतिका अनुभवी खेलाडी प्रचण्डले यो पक्कै बुझेका छन् ।
चितवनका मतदाताको हातमा अर्को अनौठो ‘च्वाइस’ छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्ड केन्द्रमा छन् र जिल्लाको ‘ग्रासरुट लेभल’मा पाण्डे भिजेका छन् । पाण्डेको राष्ट्रिय हाइट प्रचण्डको जत्तिको छैन तर पाण्डेको हाइट त्यतिसारो कम पनि छैन । पाण्डे पनि मन्त्री भइसकेका नेता हुन् । अब राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि रोज्ने ? वा आफूहरुलाई समय दिन सक्ने प्रतिनिधि ? चितवनवासीको हातमा फैसलाको जिम्मेवारी आएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेकाले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको छ । यस अर्थमा चितवनवासीले प्रचण्डलाई जिताउँदा भोलि आफ्नो प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाउँछन् । तर, यसअघि आफूले चुनाव जितेको क्षेत्रमा प्रचण्ड कति पुगे ? उनी केन्द्रीय राजनीतिमा बढी सक्रिय थिए वा आफ्नो चुनाव क्षेत्रका समस्या बुझ्न सक्रिय रहे ? यो सबै विश्ल्ेषणको अधिकार चितवनबासीसँग छ ।
चितवन कांग्रेस र राप्रपाको प्रभाव रहेको क्षेत्र हो । दोस्रो संविधानसाभाको निर्वाचनमा स्वर्गीय सुशील कोइराला चितवन क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका थिए भने चितवन ५ बाट राप्रपाका नेता तथा मन्त्री पाण्डे विजयी भएका थिए। माओवादी नेता चित्रबहादुर श्रेष्ठ भन्दा कोइराला दोब्बर मतले विजयी भएका थिए। त्यस्तै एमाले नेता दानबहादुर तामाङ र माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई भारी मतले पराजित गर्दै राप्रपाका नेता पाण्डे विजयी भएका थिए। अघिल्लो चुनावको अंकगणित कायम रह्यो भने प्रचण्डलाई यहाँ चुनाव जित्न निकै सकस छ किनकि कांग्रेस र राप्रपा मिलेर चुनाव लड्दैछन् । आफू एमालेको समर्थनमा चुनाव लड्न लागेकोले प्रचण्डले जित्ने आंकलन गरेका छन् । तर, आफ्नो दम भन्दा अर्काको सहाराको भरमा अघि बढेका प्रचण्डको बाटो सहज छैन । यसअघि यहाँबाट जित्ने दुवै पार्टी एक ठाउँमा भएको अवस्थामा त्यो एकताको बललाई जित्न प्रचण्डलाई सानो सामथ्र्यले पुग्दैन । एकतामा कतिसम्म शक्ति हुन्छ भन्ने प्रचण्डले राम्रै बुझेका होलान् ।